Waxa uu madaxa sare ee howlfulinta u magacaabay Stephen Bannon oo ka tirsan website-ka muxaafidka ee Breitbart, halka maareeyaha ololihiisa doorashana uu u magacaabay Kellyanne Conway.
“Waa dad aan caadi ahayn, waa guuleystayaal, waa horyaallo, waxaana dooneynaa inaana guuleysano” ayuu Trump u sheegay wakaaladda wararka ee AP.
Tallaabooyinka uu Trump qaaday ayaan saameyn doonin Paul Manafort oo kala waday howlaha ololihiisa tan iyo markii Trump uu bishii June shaqada ka ceyriyey madaxii hore ee ololihiisa, Corey Lewandowski.
Manafort ayaa dhowaanahan waxaa saarnaa diiradda kadib markii wargeyska New York Times uu daabacay warbixin la xiriirisay in lacag 12 milyan oo dollar oo kaash ah uu ka qaatay madaxweynihii hore ee Ukraine Viktor Yanukovich, oo ku xiran dowladda Ruushka.
Trump ayaa si aad ah uga dambeeya Hillary Clinton dhinaca codadka ra’yiga dadweynaha Mareykanka.